सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले निजी क्लिनिक नचलाउनुस् - स्वास्थ्यमन्त्री - मूल्याङ्कन अनलाइन
सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले निजी क्लिनिक नचलाउनुस् – स्वास्थ्यमन्त्री
मूल्याङ्कन अनलाइन | August 25, 2017
भदौ ९, महेन्द्रनगर(धनुषा) । स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई निजी क्लिनिक सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।
जनकपुर अञ्चल अस्पतालको निरीक्षणमा आएका मन्त्री पोखरेलले चिकित्सक तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीसँगको अन्तर्क्रियामा उक्त निर्देशन दिँदै भने, “निजी क्लिनिक नचलाई दिनोस् । यो दबाब होइन, तर राष्ट्रिय आवश्यकता हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न यो अनिवार्य छ ।”
जनकपुर अञ्चल अस्पतालबारे निकै गुनासो आएपछि स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले डा. रामपरीक्षण यादवलाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट(मेसु) बाटहटाइ दुई साताअघि मात्र नियुक्त गरेको मेसु डा. कल्पना बछारलाई लक्षित गर्दै भने, – “निजी क्लिनिक बन्द गर्ने कामको शुरुवात मेसुबाटै हुनुपर्दछ । आफै निजी क्लिनिक सञ्चालन गर्नेले अरुलाई निर्देशन दिनसक्दैन । त्यसैले मेसुले अबिलम्व निजी क्लिनिक बन्द गर्नुपर्दछ ।”
बिरामीको अत्याधिक चाप रहने यस अस्पताल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अब हामीले क्षेत्रीय होइन, प्रान्तीय दृष्टिकोणले नीति बनाउनुपर्ने र यहाँ रहेका क्षेत्रीय प्रयोगशालालाई प्रान्तीय प्रयोगशालाको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
विगत करिब २ वर्षदेखि सञ्चालन हुननसकेको यस अस्पतालको आइसीयु सेवा शीघ्र सञ्चालन हुने बताउँदै उनले सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्थापनमा संवेदनशील भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
अन्तर्क्रियामा सहभागी चिकित्सकले यस अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधारका साथै जनशक्ति अभाव रहेको गुनासो गरेका थिए ।
‘दैनिक झण्डै एकसय महिलालाई प्रसूति सेवाका लागि दुई विज्ञ, चार मेडिकल अधिकृत र १६ जना नर्स मात्र छन् । सयजना बिरामीलाई तीन नर्सले कसरी स्याहार गर्ने ?’ प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा रामनरेश पण्डितको गुनासो थियो ।
« बाढी पीडितलाई राहत र उपचारमा एनआरएन (Previous News)
(Next News) जुम्लामा २ करोड २५ लाखको स्याउ बिक्री »